नेशन लभ्स् यु केपी बा जनताको जगमा अग्लिएको राजनेता, जसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन
Tuesday, 23 Feb, 2021 10:24 AM
आज फाल्गुण ११ । केपी बा अर्थात करोडौ नेपाली मन र मुटुहरुका प्यारो र आदरणीय मान्छेको जन्मदिन । विगत केही बर्ष अगाडीदेखि नेपालमा सवैभन्दा वढी बोलिएको, सुनिएको र पढिएको मान्छको जन्मदिन । देशका मुर्छित सपनाहरुलाई व्युझाउने, देशलाई विकास र प्रगतिको अग्रगमनतर्फ डोहो¥याउने एउटा राजनेता अर्थात नेशनका बा, केपी ओलीको जन्मदिन । जसको प्राज्ञिक र राजनीतिक क्षमताको मापन गर्न हरकोहीलाई निकै कठिन हुन्छ । उहाँका जीवन संघर्षका गाथा पढेर, उहाँका बाणी सुनेर र उहाँको अनुहार हेरेर समेत हर कोहीलाई राजनीतिक र प्राज्ञिक उर्जा मिल्छ, त्यस्तो नेताको जन्मदिन । उहाँका वारेमा लेख्न हरकोहीलाई निकै कठिन हुन्छ । तर मलाई उहाँको जन्मदिनको अवसरमा शुभकामनाका केही शव्द नलेखी मन मानेन । त्यसैले केपी शर्मा ओली अर्थात हाम्रो आदर्श, हौसला र प्रेरणाको जन्मदिनको अवसरमा केही शव्दहरु खर्चिने जमर्को गरेको छु ।
भन्नेहरुले भन्न सक्दछन । एउटा विदेशी विश्वविद्यालयमा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेको मान्छेले पनि केपी ओलीलाई कमरेड नभनेर बा भनेछ । राजनीतिक चेत नभएकाहरु अर्थात देश निर्माणमा राजनीति र नेताको भुमिका नवुझनेहरुले यसले केपी ओलीलाई राजनेता भनेर देवत्वकरण गर्न खोजेछ । भन्नेहरु भन्दै गर्दछन, एउटा नेताले बा को सम्मान त्यसै पाउदैन । रिस गर्नेहरु गर्दै गरुन । एउटा नेता जसलाई सिङगो देशले वीई लभ यु केपी बा भनेर त्यतिकै नारा लगाउदैन । त्यसको पछाडी करौडो मान्छेहरुले छोराछोरीकोरुपमा बा बाट पाउने न्यानो ओत पाएका हुन सक्दन । त्यसपछि त सडकमा लाखौ मान्छेहरुले नारा लगाउछन, वीई लभ यु केपी बा । यो नारा अरुको नाममा किन लाग्दैन । समर्थकहरु हरेक नेताका होलान, एकपल्ट आफना कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षित गरेर हामीलाई पनि बा र हजुरवा वा अन्कल भनेर नारा लगाउ भनेर आदेश दिनुस त । तपाईहरुका नाममा यस्तो नारा लाग्नेछैन । तर केपी ओलीका वारेमा किन यस्तो नारा स्वतस्फुर्त लाग्छ होला, किनकी उहाँले एउटा नेताको रुपमा देश र नेपाली जनताकालागि एउटा राजनेताको रुपमा बा को अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । त्यसपछि त यस्तो नारा लाग्छ । यो सवैले बुझन जरुरी छ । बीपीलाई पनि नेपालमा महामानव भन्न खोजियो तर जवरजस्ती कार्यकर्ताबाट स्थापित गरिएको यो अलंकारभन्दा सडकबाट स्थापित गरिएको नाममा कति फरक पर्न सक्छ भन्ने कुरा भविष्यमा वीपी र केपीको जीवनको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने शोधार्थीले मात्रै भन्न सक्नेछ ।
संसारका हरेक देशहरुका नेताहरुले जव व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर जव देशप्रति आफनो जीवन खर्चिन्छन । त्यहाँ जनस्तरबाट स्वतस्फुर्त देशको अविभावकीय भुमिकामा जनताले नेताहरुलाई स्थापित गर्दछन । भारतका गान्धी भारतीय जनतामा त्यसै बापुजी हुनु भएको होइन । नेल्सन मण्डेलालाई दक्षिण अफ्रिकनमात्रले होइन, सम्पुर्ण रेसीज्मको पीडा भोग्नेहरुले आफनो शीर त्यतिकै मानेका होइनन् । नेपालमा केपी ओली त्यतिकै सवैको बा अर्थात राजनेता हुनु भएको होइन । उहाँहरुले देश र जनताप्रति निर्वाह गरेका भुमिकाका कारण उहाँहरुको यो स्थान बनेको हो । चीन जहाँ १ अर्व ४० करोड जनसंख्या छ, त्यहाँका नागरिकहरु वर्तमान चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपीङलाई चीनियाँ जनताले गौरवका साथ सी दादा (नेपालीमा सी काका) भन्दछन भने उहाँकी धर्मपत्नीलाई फङ्ग मामा (नेपालीमा फङ्ग आमा) भन्दछन । त्यो उपमा उहाँहरुले चीनियाँ जनताको वीचमा त्यतिकै आर्जन गर्नु भएको होइन् । उहाँहरुले चीन राष्ट्र र चीनियाँ जनताप्रति गरेको त्यागको परिणाम हो । नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष र बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताहरु गौरवकासाथ केपी बा र उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यलाई राधिका आमा भनेर गौरवले सम्वोधन गर्छन । त्यो पनि उहाँहरुले नेपाली जनताका वीचमा त्यतिकै आर्जन भएको बिषय होइन । यो सम्मान उहाँहरुले देश र जनताप्रति गरेको संघर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफल हो ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपीङलाई चीनियाँ जनताले गौरवका साथ सी दादा ( नेपालीमा सी काका) भन्दछन भने उहाँकी धर्मपत्नीलाई फङ्ग मामा (नेपालीमा फङ्ग आमा) भन्दछन । त्यो उपमा उहाँहरुले चीनियाँ जनताकोवीचमा त्यतिकै आर्जन गर्नु भएको होइन । उहाँहरुले चीन राष्ट्र र चीनियाँ जनताप्रति गरेको त्यागको परिणाम हो । नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष र बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताहरु गौरवकासाथ केपी बा र उहाँकी धर्मपप्नी राधिका शाक्यलाई राधिका आमा भनेर गौरवले सम्वोधन गर्छन । त्यो पनि उहाँहरुले नेपाली जनताकावीचमा त्यतिकै आर्जन भएको बिषय होइन । यो सम्मान उहाँहरुले देश र जनताप्रति गरेको संघर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफल हो ।
केपी बा, देशले गौरवको साथ तपाईलाई बा भन्छ । तपाईको नेतृत्वमा देश बन्दैछ, यो देश र जनताले तपाईप्रति गरेको विश्वास र भरोसा हो । कसरी भन्ने कुरा यो सानो आलेखमा राख्न नसकेपनि तथ्यहरुले यो कुराको पुष्टि गरेको छ र गर्ने छ । तपाई प्रधानमन्त्रीहुदाँ देश नाकावन्दीले थिलथिलो बनेको थियो । भुइँचालोले यसलाई थप मर्माहत बनाएको थियो । देशको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक अर्थात नेगेटिभ थियो । त्यस्तो अवस्थामा तपाईले मुलुकको शासनको बागडोर सम्हाल्नु भएको थियो । तपाईले नाकावन्दी र भुइँचालोले थिलथिलो बनेको देशलाई बाहिर निकालेर विश्वका १० औँ आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुकको स्थानमा नेपाललाई ल्याईपु¥याउनु भएको छ । रानीपोखरी, धरहरा, दरवार हाईस्कुल, पुरातात्विक महत्वका हाम्रा पुर्नसंरचनाहरुको निर्माण कार्य केही सम्पन्न भैसकेका छन, केही सम्पन्न हुदैछन । शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सुशासन, समृद्धि र सुखका सुचकांकमा देशले फड्को मारेको छ । सडक लगायत अन्य पुर्वाधारको निर्माणमा देशको कायापलट भएको छ । यो मैले भनेको होइन, तथ्यहरुले बोलको कुरा हो । गतबर्ष अमेरीका पढाउने मेरा मित्र डा. दिनेश पौडेल र मैले हाम्रो देशको पुर्वाधारमा आएको परिवर्तन देखाउन र चीनसँगको नेपालको कनेक्टीभिटीकावारेमा थप पहल गर्ने उदेश्यकासाथ केही चीनियाँ प्राध्यापकहरुलाई नेपाल घुमाएका थियौ । करीव एकहप्ते नेपाल भ्रमणपछि हाम्रो देशमा पुर्वाधार विकासमा आएको परिवर्तन देखेर चीन पर्कने वेलामा विमानस्थलमा उहाँहरुले भन्नु भएको थियो । मिष्टर रोका, योर कन्ट्री इज रेडी टु टेक अफ, नट वान्ली इन इन्फ्रास्टक्चर डिभलपमेण्ट, योर कन्ट्री इज फल्याइङ इन सोसियो इकोनोमिक डिभलपमेण्ट । त्यतिवेला हाम्रो छाती गौरवले फुलेको थियो । त्योवेला हामीले हाम्रो देशको राजनेता केपी ओलीप्रति गौरव गरेका थियौ ।
गतबर्ष अमेरीका पढाउने मेरा मित्र डा. दिनेश पौडेल र मैले हाम्रो देशको पुर्वाधारमा आएको परिवर्तन देखाउन र चीनसँगको नेपालको कनेक्टीभिटीकावारेमा थप पहल गर्ने उदेश्यकासाथ केही चीनियाँ प्राध्यापकहरुलाई नेपाल घुमाएका थियौ । करीव एकहप्ते नेपाल भ्रमणपछि हाम्रो देशमा पुर्वाधार विकासमा आएको परिवर्तन देखेर चीन पर्कने वेलामा विमानस्थलमा उहाँहरुले भन्नु भएको थियो । मिष्टर रोका, योर कन्ट्री इज रेडी टु टेक अफ, नट वान्ली इन इन्फ्रास्टक्चर डिभलपमेण्ट, योर कन्ट्री इज फल्याइङ इन सोसियो इकोनोमिक डिभलपमेण्ट । त्यतिवेला हाम्रो छाती गौरवले फुलेको थियो । त्योवेला हामीले हाम्रो देशको राजनेता केपी ओलीप्रति गौरव गरेका थियौ ।
केपी बा, हामीले गरेको हाम्रो विकास विदेशीहरुले भन्दिएपछि मात्रै पत्याउने परम्परा नेपालमा अझै छ । तर नेपालमा आएको यो विकासको परिवर्तनलाई, तपाइले जुरो र सिङग हालिदिएर तपाइले नै हुक्रा गर्ने बनाइदिएका मानिसहरु किन पत्याउदैनन ? किनकी उहाँहरुलाई तपाईको लोकप्रीयताप्रति रीस, आक्रोस र डाहा छ । त्यो छटपटीमा तपाइका समकालिनहरु निदाउन पनि सिलिपीङ टयावलेट खाने गरेका छन रे भन्ने सुन्नमा आएको छ । आखिर रीस आवेग र आक्रोसले उनीहरुलाई नै जलाउने हो, जल्न दिऔ । तपाईको ४ बर्षे गोलघर सहित १४ बर्ष जेल जीवनको पुस्तकालयमा आर्जन गरेको ज्ञानले मुलुक अगाडी वढिरेहेको छ । तपाईका करौडौ कार्यकर्ताहरुले तपाईप्रति देखाएको विश्वासले तपाई गोलघरमा हुदाँ मुसाले तपाईको खुट्टाको औलो चिथोरेको याद पनि तपाइकालागि गौरव लाग्नुपर्छ बा । तपाईले देशको परिवर्तनको लागि त्यतिवेला देखेको, पढेको र सोचेको त्यो ज्ञानको उर्जामा करोडौ नेपालीहरु तपाईको पथ प्रदर्शक वनेका छन । तपाईले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाक्षामा देशलाई अगाडी बढाइरहनु भएको छ । यो आकाक्षा संसारको सवैभन्दा ठुलो सिदान्त वा वाद हो, । यो माक्र्सवाद, गान्धीवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद भन्दापनि ठुलो वाद हो । यसोभन्दा मान्छेहरु जिव्रो टोक्न सक्छन । तर देशका विद्धानहरुले सोचुन, यो भन्दा ठुलो वाद देशको लागि अरु केही हुन सक्दैन । त्यसलाई समयक्रममा पुष्टि गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हुनेछ ।
बा, अहिले तपाइलाई प्रतिगमनको अगुवा भन्ने आरोप केही तपाईले नै राजनीतिक प्राण र त्राण दिएका मान्छेहरु लगाउदैछन । पदीय आँकाक्षाकालागि सचीवालयका नाममा पार्टी भित्र ४ र ५ को समीकरण वनाएर तपाईलाई घेराऊ गर्ने यी मान्छेहरुलाई जनताले राम्रै बुझेका छन । देश विदेशमा देशको छवी उच्च वनाउन सफल, देशलाई भारतवेष्टितवाट ल्याण्डलिक्ड देश बनाउने नेता, जव नेपाली जन जनको मुटु र मनमा वस्छ नी, त्यसपछि यिनीहरुलाई औडाहा हुन्छ, घेराऊ गर्छन, रानीनामा माग्छन, नगदीमा पद माग्दन, । जनताको जगमा अग्लिएको नेताले जनतालाई सर्वौपरी ठानेर तपाइले गरेको जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्ने निर्णय पनि यिनीहरुलाई अपाच्य हुन्छ । त्यसपछि तपाइको विरोध गर्दछन, विचराहरु सडकभरी सूर्य चिन्ह टाँगेर, अनि भाडामा ल्याएका जनताका हातमा सूर्य चिन्ह थमाएर । बा, तपाईको लोकप्रीयताको इष्र्यामा केही मानिसहरु पार्टी छोडेर गएपनि देशभरीका मान्छे जम्मा गरेर तपाईको विरोध गर्ने माधव प्रचण्डलाई एकपल्ट त धन्यवाद भन्नै पर्छ, किनकी विरोधी भएर पनि आखिर यिनीहरुले भोट त सुर्य चिन्ह मै मागिरहेका छन नी, नेकपा अर्थात केपी शर्मा ओलीको पार्टीको भोलिण्टियर भएर ।
हामी नेपाली जनतालाई गौरव छ, हाम्रो पार्टी र देशको नेताप्रति अर्थात केपी ओलीप्रति । हामी भुगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्रमा सानो हौला, तर सार्वभौमिकता सवै देशको समान छ । विश्वका समकालिन वर्तमान नेताहरुमा हाम्रो नेता केपी शर्मा ओलीको जेलजीवन सहितको त्याग वलिदान र सर्मपणको इतिहास वर्तमान भारत, चीन र अमेरीका मात्रै होइन, विश्वकै राष्ट्र र सरकार पमुख भन्दा गहकिलो र अग्लो छ । मैले अनुसन्धान गरेर हेरेको छु यो मेरो दावी हो । यसमा हामी नेपालीहरुले गर्व गर्न सक्नु पर्दछ । विश्वका राजनेताहरुको छविमा संघर्षको भट्टीमा खारिएर अग्लो छवि बनाउनु भएका हाम्रो देशको नेता केपी शर्मा ओलीले अहिले जनताको नासो जनतामा फिर्ता गरेर स्थिर राजनीति, सरकार र देशको विकास र प्रगति चाहनु भएको छ । स्वाधिन र समृद्ध देश बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने तपाइको सोच पुरा होस् । देशमा स्थिर राजनीति र विकासप्रतिको तपाईको सोचले सार्थकता पाओस, । नेशनको बा अर्थात केपी बा, तपाईको जन्मदिनको अवसरमा तपाईलाई नेपाली जनताको तर्फबाट शुभकामना ।